IHymmone yokukhula (iHymmone yokukhula, GH, HGH, somatotropin, somatropin) - i-hormone ye peptide ye-pituitary yangaphambili, esetyenziswa kwimidlalo ukubunjwa kwemisipha. I-hormone yokukhula okanye i-somatotropin (ukusuka kwi-Latin soma-body) enegama layo kubantu abancinci, ibangela ukunyuka okuphawulekayo kumgca (ubude). Ukukhula kwakukho ngenxa yokukhula kwamathambo amathambo omzimba.
Ukuxilongwa kwe-hormone yokukhula egazini yi-1-5 ng / ml, ngelixa iindawo eziphakamileyo ziphakama kwi-10-20 kunye ne-45 ng / ml. Kwakuqala ukuhlukaniswa kwi-1956. Imfihlelo ye-hormone yokukhula kwi-pituitary gland ekuphenduleni iimpawu ezisuka kwi-hypothalamus. Ngokuqhelekileyo, emva kweminyaka engamashumi amabini, ukuveliswa kwalo hormone ngumzimba kuncipha. Inkqubo yokuguga ihambelana ngqo nomlinganiselo wokukhululwa kwehomoni yokukhula. Ngokomyinge, emva kweminyaka eyi-20, yonke iminyaka eyi-10 inqanaba lemveliso yehla ye-15%.
I-hormone yokukhula ayikho ukwahluka kwesondo. Oko kukuthi, izinga lalo lilinganayo kumadoda nakwabesetyhini. Nangona kunjalo ukuba ukusetyenziswa kwamalungiselelo aqukethe i-hormone yokukhula, ivaliwe iVADO (i-World anti-Doping Organization) HGH amalungiselelo zikhoyo Thayilendi .
Izakhiwo ze-Pharmacological zeHGH:
- Impembelelo ye-Anabolic - ibangela ukukhula kwemisipha
- Isenzo esichasene nesithintelo - sinqanda ukuphazamiseka kwemisipha
- Iyancitshisa amafutha omzimba
- Ukuphucula ukusebenzisa amandla
- Ngaba isiphumo sokuvuselela
- Kuchukumisa ukukhula kwakhona kwezitho zangaphakathi (ezithintekayo ubudala)
- Ubangela ukukhula kweethambo nokwandisa ukukhula kwabaselula ukuya kwi-26 iminyaka (de kube kuvalwe indawo zokukhula), iqinisa amathambo
- Ukomeleza isistim somzimba
Ezinye zeempembelelo izidakamizwa zizibangela, kodwa inxalenye enkulu yemiphumo yayo ihambelana nokukhula kwe-insulin efana ne-IGF-1 (ngaphambili yayibizwa ngokuba yi-somatomedin C), eveliswa yinyathelo lokukhula kwehomoni kwisibindi kwaye ikhuthaza ukukhula kwamalungu amaninzi angaphakathi. Phantse yonke imiphumo ye-hormone yokukhula kwimidlalo enxulumene nesenzo se-IGF-1.
Utshintsho olunexesha elidala kwi-secretion ye-hormone yokukhula
Ukuvalwa kwe-hormone yokukhula kwancipha ngokukhawuleza. Kuyinto encinci kwi-asebekhulile, abaye bancitshiswa njengoluhlu lwesiseko, kunye nobukhulu kunye nobukhulu bemigangatho yokufihla. Inqanaba elisezantsi lokunyuka kwehomoni liphezulu kakhulu ebuntwaneni bokuqala, ukuphakama kwamaplitude okwexesha elide ngexesha lokukhula kwentsha ngokukhawuleza kokukhula kunye nakwixesha lokukhulelwa. Isiqulatho se-Circadian ekusithekeni kwe-hormone yokukhula:
Ukukhutshwa kwe-hormone yokukhula kunye nezinye i-hormone ezininzi ezenzeka ngezikhathi ezithile kwaye zinemihlathi emininzi emini (ngokuqhelekileyo ukugcinwa kwemfihlo kwimizuzu yonke i-3-5 iiyure). Ingqungquthela ephakamileyo ibonwa ebusuku, malunga neyure emva kokulala.
Ekuqaleni, amalungiselelo okukhula kwe-hormone aqala ukusetyenziswa ngenjongo yonyango, nangona kunjalo, phantse ngexesha elifanayo le hormone yayisasazeka kwimidlalo, ngenxa yokukwazi ukwandisa ubunzima be-muscle nokunciphisa amanqindi omzimba. Ukulungiswa kokuqala kwe-HGH kwakuyizidumbu ze-pituitary, kwaye kuphela kwi-1981 yenziwe i-reatbinant drug somatotropin.
Kwi-1989, i-hormone yokukhula yemfuyo yayivinjelwe yiKomiti yeOlimpiki. Nangona ukusetyenziswa kwe-hormone yokukhula kwiinjongo zezemidlalo kuvumelekile, kwiminyaka elishumi edlulileyo, ukuthengiswa kweziyobisi kwande kaninzi. Ngokukodwa, i-hormone yokukhula esetyenziswa kwimidlalo, ngokukodwa kwisakhiwo somzimba, apho idibene namanye amachiza e-anabolic.
Ukwandisa isisundu somzimba kunye nokutshisa kwamafutha
Isizathu esiyinhloko sokuthandwa kwe-HGH kwimidlalo kukukwazi ukunciphisa inani lamanqatha angaphantsi. Ukongezelela, uphando lubonise ukuba ukuthatha i-hormone yokukhula kubangela ukwanda kwemisipha yomzimba, izicubu ezinxibelelwano kunye nokwandisa umthamo weeseli zamascle ngenxa yokuqokelela umbane.
Enye imiphumo ebalulekileyo ye-hormone yokukhula-ukunciphisa ukuvakala kwemazi. Oku kungenxa yokukwazi ukuqinisa amathambo kunye nokuxhamla (i-tendon, cartilage) izicubu. I-hormone yokukhula ikhawuleza ukuphulukisa nokuguqulwa kwamathambo emva kokulimala.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukusetyenziswa kwe-HGH kwi-powerlifting ayikho nto, ekubeni ekufunyaneni kufunyaniswe ukuba ayikhulise ukusebenza kombane. I-Somatotropin iphinda ikhulise amandla kunye nokusebenza, kwaye ngokuchaseneyo, ukwehla kwinqanaba lokukhathala nokunciphisa ukubuyiswa, ngoko-hormone yokukhula ayinalutho kubadlali bezemidlalo, apho ezi zikhokelo.
Isiphetho esiqhelekileyo kukuba i-hormone yokukhula ingasetyenziswa kwimidlalo ngenjongo yokufumana uncedo.
Ukusebenza okuphezulu, iziganeko eziphantsi kweziphumo ezibi, iziyobisi azichaphazeli umsebenzi we-penis kunye ne-potency ayibangeli imiphumo ye-androgenic kwaye ayifuni i-PCT emva kwesilinganiso semali yesisindo esiphezulu sinyuke kancane (3-4 kg), kwaye Kwezinye iimeko azikho konke utshintsho kuhambelana nokulahlekelwa okukhulu kweoli.
Iindleko eziphezulu zeziyobisi zi malunga ne-2-3 eziliwaka zeedola nganye.
Imiphumo emibi ye-hormone yokukhula komntu
Ngenxa yokuba i-HGH ikhiqizwa ngokwemvelo emzimbeni womntu, iziphumo ezichaphazelekayo ze-HGH aziqabile. Imiphumo emibi ivela ikakhulu kulawo matyala apho ukukhula kweHormone kusetyenziswa kumaxabiso angaphezulu kunokuba kunconywe kwaye ixesha elide kunokuba luchazwe yiingcali. Ngokwenza oko, kukho iziphumo ezichaphazelekayo zokukhula komntu iHormone (ubukhulu bokuba kwenzeka):
I-Tunnel syndrome ibonakaliswe ngentlungu kunye nokugqithisa ekupheleni. Oku kubangelwa ukuba ukwanda kweemisipha kukunyanzelisa iimbilini zomhlaba. Esi siphumo secala asiyingozi kwaye sisombulula ngokukhawuleza emva kokunciphisa umthamo.
Ukuqokelelwa kwamanzi asemzimbeni, kungeyona yiphumo elibi, kuba ukuqokelelwa kwamanzi kuyimisipha, kubanika ubungakanani obukhulu kunye nokunyaniseka. NgokweJikelele, ubunzima obuncinane bokubuyisela emva kokuphela kwekhosi.
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu - lupheliswa ngokunciphisa umthamo weHGH, okanye ukusetyenziswa kwezidakamizwa ezichasayo.
Ukuvinjelwa komsebenzi we-thyroid gland - kukuzimela kungabonakali, kuba uxinzelelo luphantsi kakhulu. Ukupheliswa kwayo kunye nokwandisa ukusebenza komjikelezo kusetyenziswa i-Thyroxin kwisilinganiso se-25 mcg ngosuku. Emva kokuyeka ukunyuka kwehomoni, umsebenzi we-thyroid uvuselelwe ngokupheleleyo.
Hyperglycemia - ukwanda kwezinga le-glucose egazini. Ukuphelisa i-insulin okanye iziyobisi ezikhuthaza i-pancreas (gliclazide). Ngokuqhelekileyo ayidingi amanyathelo angaphezulu kwaye ahlaziywa ngokupheleleyo. Unokuthatha izongezelelo nge-alpha lipoic acid, ubuyisela ubukhulu be-insulin.
I-Acromegaly - eso sifo senziwa ngenxa yokusetyenziswa kakubi kwezidakamizwa ze-hormone yokukhula. Xa isetyenziswe ngokuchanekileyo, ayifumaneki.
I-Hypertrophy yentliziyo kunye nezinye izitho zenzeke kuphela kwimeko yokusetyenziswa kwexesha elide leHGH kumanani amakhulu. Xa isetyenziswe ngokuchanekileyo, ayifumaneki.
Iimiphumo zengqungquthela ze-mythcal of hormone yokukhula
Ukwanda kwisisu - kukholelwa kakhulu ukuba i-hormone yokukhula iyakwandisa isisu ngenxa ye-hyperplasia yezitho zangaphakathi (njengoko amathumbu kunye nezitho zine-receptors ze-IGF-1). Okwangoku akukho ubungqina benzululwazi bokuba kunjalo, nangona kunjalo, imizekelo eqaqambileyo yenguqu yesisu esisemgangathweni yabasebenzi bezakhono ezichaphazelekayo. Nangona kunjalo, amava asebenzayo amaninzi abagijimi abonisa ukuba iikhosi ze-classic zokukhula kwehommoni azikho ekukholeni kwesisu. Iingcali zikholelwa ukuba ukwandiswa kwesisu (kwi-Intanethi yeNtanethi igxina igama elithi "GH gut") ineempembelelo ezininzi zemvelo kunye nokuba kunokwenzeka xa usebenzisa amanani amakhulu eGH kunye kunye ne-insulin, i-steroids, kunye nokusetyenziswa kwamanani amakhulu yokutya.
Impembelelo kwi-potency kunye nomsebenzi we-penis - i-HGH ayinayo impembelelo engalunganga kwimisebenzi yesondo.
Ukunciphisa ukwenziwa kwemfihlo ye-hormone yokukhula - uProfesa uElmer M. Cranton, MD uqhube isifundo kwizilwanyana ezingaphezu kwe100, ezingazange zifunyanwe zikhuphe ukuzimela kwayo.
I-Cancer - i-hormone yokukhula ibangela ukukhawuleza okuphawulekayo kokuhlukana kweeseli zesisu, ngoko abaphandi banenkxalabo malunga nokuba i-hormone yokukhula kwimisipha. Kwakukho uphando oluthile, oluye lwabakho abantu abaphathwa ngokunyuka kwehomoni, ukuphindaphindiweyo kweenkqubo ezingenasiplastiki ezingafaniyo nakubantu bonke abangathetha ngokungabikho kwemiphumo ye-carcinogen yokukhula kwehomoni.
Isiphephelo esiqhelekileyo malunga nemiphumo emibi
I-hormone yokukhula ayikho nto ibangelwa yimiphumo emibi xa ifakwe kwisilinganiso esilinganiselweyo. Phantse zonke iziphumo zempembelelo zibuyiselwa. Ngelo xesha, kuboniswa ngokucacileyo ukuba izilungiso zeHGH ziyakwazi ukuvuselela umzimba ukuphucula umzimba, ukunciphisa i-cholesterol embi, ukuphucula isikhumba, ukuqinisa amathambo kunye nemigudu kunye neminye imiphumo emihle.
Abakhuthazi be-hormone yokukhula
Abalawuli abakhulu bokuvalwa kwemimoni ye-hormone - i-peptide hormone ye-hypothalamus (i-somatostatin kunye ne-somatoliberin), efihliwe ngama-neurosecretory amaseli e-hypothalamus kwimigodi ye-portal ye-pituitary kwaye yenza ngokuthe ngqo kwi-somatotrope. Nangona kunjalo, ukulinganiswa kwezi hormone kunye nokuvalwa kwehomoni ye-hormone kuchaphazelekayo kwizinto ezininzi zomzimba. Iingcali zenzululwazi zenze ukuba ubungqina be-hormone yokukhula bunokunyuswa ngamaxesha e-3-5, ngaphandle kokusetyenziswa kweendlela ze-hormonal.
Iipeptides zizona zikhuthazi kakhulu zokukhupha i-hormone yokukhula, ukwandisa i-7-15 ngamaxesha amaxesha eendleko zeklasi elilinganayo ngamaxesha amaninzi apha ngezantsi:
HGH Frag (176-191) - i fragment
I-hormone yokukhula kunye neep peptides ekwakheni umzimba
Peptides (ukusuka kwisiGrike.) - inondlo - intsapho yezinto ezakhiwa iimamoleksi ezivela kwiindawo zokuhlala ze-α-amino acid ezixutywe kwi-chain peptide (amide). Ziyimvelo yendalo okanye idibeneyo equkethe amashumi, amakhulu okanye amawaka ezinyunithi zeMonomeric - amino acid. Eli klasi lihluke kakhulu kwaye lisebenza emzimbeni kwimisebenzi eyahlukeneyo yokulawula. Kule nqaku siza kuqwalasela kuphela ezo peptide ezisetyenziselwa ezemidlalo ukulungiswa kwezibonakaliso zomzimba.
Okwangoku kwiimarike Thayilendi ngokuphindaphindiweyo kukho iipepptide, eziyi-stimulants hormone yokukhula. Iipeptide ezidumileyo kwi-Bodybuilding eThailand:
Ukususela kwiqela leGhrelin (GHRP): (yakha i-GR enokuthi ixinzelele ingqalelo emva kokujova, kungakhathaliseki ukuba yintoni imini kunye nokuba khona kwe-somatostatin egazini).
GHRP-6 kunye neHexarelin
Ukusuka kwiqela lokukhula kweHormone ukukhulula ihomoni (GHRH): (isingeniso emzimbeni kubangela ukunyuka okufana nokutshangatshangiswa okuza kubuthathaka kwiiyure xa ukugcinwa kwemvelo kwe-GRS kuncitshiswe yi-somatostatin, kwaye iphakamileyo ngexesha lendalo ukwandiswa kwenkxalabo ye-GR (umz. ebusuku) Ngamanye amagama i-GHRH ikwandisa ukukhutshwa kwe-GRS, ngaphandle kokuphazamisa intambo yendalo.
IGFF (1-29) iSermorelin
HGH Frag (176-191) liqhekeza le-hormone yokukhula (i-fat burner)
Iintlobo zeep peptides
Imibuzo emininzi iphakama, kutheni usebenzisa i-peptide into entsha, ukuba kukho i-hormone yokukhula yabantu? Impendulo ilula: ama-peptide stimulants aneenzuzo ezininzi eziphosakeleyo.
I-Peptides ixabiso elincinci kune-hormone yokukhula. Iindleko zekhosi efanayo ziya kuba ngamaxesha athile aphantsi.
Iinkqubo ezahlukeneyo zesenzo kunye nesigamu-ubomi siyavumela ukuba sisebenzise i-curve i-curve yeempendulo ze-anabolic.
Imiphumo eyahlukileyo kwindlala kunye ne-metabolism, ikuvumela ukuba ukhethe okunye okanye ezinye izinto.
Ngomzuzu ukuveliswa nokusabalaliswa kweepepptide akulawulwa ngumthetho, ngoko ke kukhuselekile ukuthumela intanethi.
Ngokukhawuleza kwaye yaphela ngokupheleleyo, ngoko akukho ukoyiko lokulawulwa kwe-doping.
Iipeptides, kwakunye ne-classic hormone yokukhula kulula ukujonga ubungqina. Kwanele ukudlula iimvavanyo kwinqanaba le-somatotropin kwiplasma emva kokulawulwa kweziyobisi.
Ukulungelelanisa ezi zifundo ze-hormone yokukhula?
I-hormone yokukhula ingasetyenziselwa ngamadoda kunye nabasetyhini ngaphezu kweminyaka yobudala be-20 (abantu abatsha banokufumana ukuphuhliswa kwamathambo njengendlela yokuqinisa ukuphakama kwemisundu. Ubungakanani bemizimba bunyuke kancinci, oku kwenzeka ngenxa yezikhulu ukulahlekelwa kwamafutha.
Imiphumo emibi ngexesha nangemva kokuba ikhosi ingapheliyo, ngokuqhelekileyo iyakwenziwa kwakhona.
Ikhosi iyachaswa ngabantu abanesifo sikashukela (i-hormone yokukhula yandisa inani le-glucose egazini), ilumkiso kufuneka lisetyenziswe kwi-hypertension (i-hormone yokukhula komntu inokwandisa). Ngaphambi kokusebenzisa isilwanyana kufuneka udibane nodokotela.
I-3 ethandwa kakhulu yiHGH eThailand